China FD feed bar bar 68106 mveliso kunye nabathengisi | Yoqobo
Umatshini wokuthunga we-YAMATO Original FD bar, ngenxa yeempawu ezibonakalayo zomatshini we-YAMATO FD, ibha yokutya ye-YAMATO umatshini wokuqala wokuthunga umde kunomnye umatshini wokuthunga, owenza ukuba unobunzima obuphezulu kakhulu bokuvelisa.
Owona mqobo uphambili ngala manqaku mane alandelayo:
Okokuqala, ubume bendawo nganye yokutya kufuneka bulawulwe ngaphakathi kwe-0.003. Kwibha yesondlo ende kunye necekeceke, ukucinywa kokucinywa kukhulu.
Inqaku lesibini, ukutyibilika kwesilayidi esiphakathi kwesilayidi.Ngenxa yokuba umphezulu woqhakamshelwano lwezincedisi zesigaba sokutyibilika azilungiswanga kunye nokulungiswa kwangexesha elinye, ubungqongqo bezantsi lomjelo wesilayidi kunye nokuthamba kwepleyiti yesembozo kuyafuneka kuba ngaphezulu, kwaye ukufana kwendawo yokutyibilika kwesilayidi kufuneka nayo iqinisekiswe.
Inqaku lesithathu, Ukuchaneka kwesilayidi sebar ye-bar yangaphambi kwesondlo iyafana naleyo yomngxunya webar yesilayidi kwibar yeSondlo yangasemva, ukuze kuqinisekiswe ukuhamba kakuhle kweebar ezimbini zoKondla Ukuza kuthi ga ngoku, thina Sebenzisa isixhobo esikhethekileyo sokuqhubekeka, kunye neminyaka emininzi yamava emveliso.
Inqaku lesine, sisebenzisa i-forging blank, inokuqinisekisa ukusebenza kwe-bar ye-feed, kodwa inyuse kakhulu ubunzima bokuqhubekeka kunye neendleko zemveliso. Ukuqinisekisa ukuzinza kwenja yokutya xa umatshini wokuthunga usebenza, nokuba umatshini uyavuza na kunye nengxolo yomatshini, sisalathiso esibalulekileyo sokusebenza okuhle okanye ukungasebenzi kakuhle komatshini wonke wokuthunga. Emva kweminyaka yophando kunye Uphuhliso kunye nokuqinisekiswa kwemveliso ngobuninzi, ukuchaneka kwebar yeSondlo kunganelisa ngokupheleleyo iimfuno zoomatshini bokuthunga abakumgangatho wehlabathi.
Egqithileyo Icebo lokucoca ulwelo oyile
Okulandelayo: IIMPAWU HOLDER C.SET